भन्सार दर र नीति परिमार्जनका कारण भारतबाट खसीबाेका कम आयात
असोज २०, २०७६
काठमाडौं -विगतका वर्षहरुको तुलनामा भारतबाट यस वर्ष नेपालमा खसीबोका भित्रिने क्रम निकै घटेको पाइएको छ । नेपाली उत्पादनले राम्रो बजार पाएपछि भारतबाट नेपालमा भित्रिने खसीबोका वार्षिक दरमा यस वर्ष करीब ५० प्रतिशतले कमी आएको हो ।
पशु सेवा विभागका अनुसार भारतबाट मात्रै वार्षिक रुपमा करीब चारदेखि पाँच लाख खसीबोका नेपाल भित्रिने अघिल्लो वर्षसम्मको तथ्याङ्क छ ।
तर यस वर्ष सो सङ्ख्यामा ५० प्रतिशतभन्दा बढी कमी आएको छ ।
यस वर्ष हालसम्म करिब २ लाख ३५ हजार खसीबोका भित्रिएको तथ्याङ्क रहेको विभागले जनाएको छ । जुन यो वर्षभरिको तथ्याङ्क हो ।
भारतबाट आयात हुने खसीबोकाको भन्सार दरसमेत वृद्धि हुनु, स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाणपत्र अनिवार्य हुनुलगायत कारणले भारतबाट नेपालमा हुने आयातमा कमी आएको विभागका सूचना अधिकारी डा चन्द्र ढकालले बताए ।
नेपालमा वार्षिक एक करोड २० लाख खसीबोका र बाख्रा उत्पादन हुने गर्दछ । जसमध्ये करीब ५० प्रतिशतको हाराहारीमा खसीबोका उत्पादन हुने तथ्याङ्क रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।
यसैगरी डोल्पा, मनाङ, मुस्ताङ लगायतका क्षेत्रमा उत्पादन हुने च्याङ्ग्राले पनि राम्रो बजार पाएका छन् । सो क्षेत्रमा उत्पादन हुने च्याङ्ग्राले काठमाडाैँ, पोखरा लगायत नेपालका विभिन्न बजारमा राम्रो बजार पाएको पशु सेवा विभागले जनाएको छ ।
स्वदेशी खसीबोका र च्याङ्ग्राले यस वर्ष राम्रो मूल्य पाएपछि किसानसमेत उत्साही भएको पशु सेवा विभागले जनाएको छ । जसले गर्दा अब खसीबोका उत्पादनमा नेपाली बजारसक्षम बन्न सक्ने विभागका सूचना अधिकारी डा ढकाल बताउँछन् ।
यस वर्ष दशैँ पर्वलाई लक्षित गरी भारतबाट प्रक्रिया पूरा गरेर नेपालमा खसीबोका भित्रिने सङ्ख्या पनि निकै कम छ ।
दशैँ पर्वलाई लक्षित गरी भारतबाट प्रक्रिया पूरा गरी खसीबोका भित्रिने क्रम अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष निकै कम रहेको पशु सेवा विभागले जनाएको छ ।
विश्व बैंकबाट ५४ अर्ब ऋण सहायता स्वीकार गरिने
चिया निकासीमा सकस, नाका परिवर्तन गर्दा भन्सार खर्चिलो
बूढानीलकण्ठको बजेट एक अर्ब ६८ करोड, डुबान अध्ययन ग...
भूकम्पपछि पाँच लाख घरको पुनर्निर्माण सम्पन्न
लाज पचेका भारतीय मिडिया !
संकटका बेला नागरिकको दु:ख नदेख्ने सत्ता !
नेकपा कलहको अन्तर्य
नारायणीमा नदीमा बाढी
स्याङ्जामा कांग्रेस छाडेर नेकपा प्रवेश
वर्षाले कटान र डुबानको डर
२० जनालाई बेपत्ता पार्ने सिन्धुपाल्चोकको पहिरो कहाँबाट र कसरी आयो ? [भिडियो रिपोर्ट]
सिन्धुपाल्चोकको नियति : बर्सेनि ठूल्ठूला प्राकृतिक विपत्ति !
कजाकास्तानमा कोरोनाभाइरसभन्दा खतरनाक रोग देखिएको छ : चिनियाँ अधिकारी
सुदूरपश्चिममा २ प्रतिशत सङ्क्रमित मात्रै आइसोलेशनमा
जाजरकोटको बारेकोटमा पहिरोको वितण्डा : ३ जनाको शव भेटियो, ९ जना बेपत्ता